स्वास्थ्य मन्त्री थापाको प्रष्टोक्ति : ‘निशुल्क औषधि छ ! औषधि छैन !!’ | Nepali Health
२०७३ माघ १९ गते १७:३६ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, १९ माघ । जिल्ला जिल्लाबाट निशुल्क औषधि अभावका समाचार आउन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्री थापाले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । तर उनले समाचारमा आएजस्तो बास्तविकता नभएको दावी गरेका छन् ।
बुधबार विहान ट्वीट मार्फत लामो बक्तव्य प्रकाशित गर्दै मन्त्री थापाले स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधिको बर्तमान अवस्था र आफूले गरेको प्रयास बारे जानकारी दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘फलानो संस्थामा औषधि छैन भन्ने समाचारले म आभारी छु किनकी यसले एकातिर मन्त्रालयले जानकारी पाएको छ भने अर्कोतिर तलका निकायलाई काम गराउन यसल थप दवाव सिर्जना गरेको छ ।’
बक्तव्यमा उनले समाचारमा सबैकुरा नआएकोले केही भ्रम समेत सिर्जना भएको भन्दै बास्तविकता यसरी प्रष्ट्याएका छन् ।
स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधीको बर्तमान अवस्था, हाम्रा प्रयासहरु बारे जानकारी र सम्बन्धित सबै समक्ष मेरो अपील :
निशुल्क औषधि छ, औषधि छैन!!!
प्रत्येक दिन जसो समाचार आउँछ फलानो स्वास्थ्य संस्थामा औषधि छैन । तर म आभारी छु किनकी एकातिर मन्त्रालयले जानकारी पाएको छ भने अर्को तिर तलका निकायलाई काम गराउन यसले थप दवाव सिर्जना गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि पनि पर्याप्त र्पुयाउन सकेन भन्ने लाग्नु स्वाभाविक नै हो तर बुझाई यस्तो पनि नहोस कि यस अघि स्वास्थ्य संस्थामा सधै औषधि प्रयाप्त हुन्थ्यो र अहिले बर्वाद भएको छ । त्यसैले केहि कुरा वताउन आवश्यक ठानेको छु ।
हामी आउँदाको अवस्था :
भाद्र १२ गते मन्त्रालय पुग्दा मेरो चासो मध्येका विषय थियो औषधिको उपलब्धता । २०६६ सालमा निशुल्क औषधि वितरण गर्ने घोषणा गरेको सरकारले २०७१ भाद्र १३ मा जिल्लामा ७०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५६ र स्वास्थ्य चौकीमा ३५ प्रकारका औषधि निशुल्क हुने घोषणा गरेको रहेछ । तर २०७१ सालभाद्र १३ मा घोषणा गरेको सरकारले २०७३ भाद्र १२ मापुग्दा सम्म केन्द्रबाट औषधि भने किनेको रहेनछ । घोषणा छ, औषधि छैन । केन्द्रमा पैसा छ तर औषधि खरिद भएको छैन । न क्षमता छ न इच्छा शक्ति । जिल्लामा न समयमा औषधि जान्छ न समयमा पैसा जान्छ । पैसाको अख्तियारी गए पछि पनि आ.ब.को अन्तिममा मात्र औषधि खरिद प्रकृया शुरु हुन्छ । न अनुगमन छ, न वितरण । अस्त व्यस्त अवस्था थियो । म प्रष्ट थिएँ, मैले केहि ठोस काम अगाडि वढाउनु पर्छ ।
हामीले गरेका प्रयास :
१. मन्त्रालय पुगेपछि मैले सोधे किन यस्तो हुन्छ ? सबैको जवाफ थियो, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीमा समस्या छ । म आँउदा सरकारले संसोधित खरिद ऐनको नियमावलीको काम सक्न लागेको थियो तर स्वास्थ्यका थुप्रै समस्या संवोधन भएका थिएनन । अथक प्रयासबाट त्यो नियमावलीमा स्वास्थ्य सम्बन्धिमा मालसमान खरिदमा रहेका सबै जटिलताहरूलाई फुकाउने बुँदाहरू समावेश गरयौँ । अब सार्वजनिक खरिद ऐनको समस्याका कारण औषधि लगायतको खरिदमा समस्या छ भनेर गुनासो गर्ने ठाँउ पक्कै बन्दहोला ।
२. तर समस्या यो मात्र थिएन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कि सामान किन्नै सक्दैन कि किन्ने मान्छे अख्तियारमा पुग्छ । बिषय औषधिको मात्र होईन । भरतपुर क्यान्सर अस्पतालले पेट स्कान मेसिन किन्न सक्दैन, बीर अस्पतालले रेडियसन मेसिन किन्न सक्दैन । कहिले स्पेसिफिकेसनमा समस्या, कहिले मुल्याङ्कनमा ।
झट्ट हेर्दा नियतमा नै समस्या भएकोले यस्तो भएको भन्ने लाग्छ । कतिपय सन्दर्भमा हो पनि तर कतिपय सन्दर्भमा यो विषय नियतसंग नभएर क्षमतासंग पनि जोडिएको छ । हामीले घोषणा सजिलै गर्छौ तर क्षमता र संरचना मजबुद बनाउन कहिल्यै खोजेनौँ ।
अतः हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको खरिद प्रणालीमा नै आमुल सुधार गर्नुपर्छ भनेर लामो समयदेखि थन्किएर बसेको Procurement Reform Action Plan लाई परिमार्जन गर्दै दीर्घकालिन समाधानका लागि काम शुरु गरेका छौँ । यसको परिणाम आउन केहि समय लाग्छ तर परिणाम ल्याउछौं । त्यसपछि स्वास्थ्यमा खरिदको झमेला सदाको लागि अन्त्य हुनेछ ।
३. हामी औषधि औषधि त भनि रहन्छौं, केन्द्रमा औषधि किनेर स्वास्थ्य चौकीसम्म बाड्ने अनि औषधि कति किनेको, कुन चौकीमा कति भएको नभएको चासो पनि हुने तर यसरी पुगेको औषधि कसले प्रयोग गरिरहेको छ न जानकारी हुने न कसैको चासो हुने ! यो तरिकाबाट जति औषधि किने पनि जति औषधि पुरयाए पनि कहिल्यै पुग्दैन । यो मोडेलमा सुधार नगरिकन हुदै हुँदैन ।
औषधि उपलब्ध गराउने हो, अहिले भन्दा अझ बढि उपलव्ध गराउने हो र अझै व्यवस्थित गराउने हो तर अहिलेको ढाँचावाट होईन । त्यसो भए कसरी त ? उपयुक्त मोडेल के हो ? त्यसमा काम गरिराखेको छु ।
४.माथि मैले भनेको कुरा त सुधारका कामहरू हुन जसले परिणाम त दिन्छ तर समय लाग्छ । स्वास्थ्य संस्थामा औषधि त अहिले नै चाहिएको छ । निशुल्क औषधिको लागि भनेर कुल छुट्टाएको रकम मध्ये केन्द्रमा ७० %, क्षेत्रमा १० % र जिल्लामा २० % रकम विनियोजित हुने गर्दो रहेछ । विगतका बर्षमा पनि पैसा त छुट्टिन्थ्यो तर खर्च हुदो रहेन्छ ।
यसपटक केन्द्रमा असोज १६ गते नै बोलपत्र आव्हान भयो (स्वास्थ्य मन्त्रालयको इतिहासमा नै यति छिटो र सवै औषधि किन्ने गरि प्रकृया शुरु भएको पहिलो पटक हो) तर हाम्रो प्रकृया गत झण्झट, संस्था गत क्षमता कस्तो होला त यो बोलपत्रबाट औषधि खरिद गरेर हाम्रो हातमा औषधि पर्न ७ महिना अर्थात कम्तिमा बैशाख लाग्छ । बैशाखवाट हाम्रो स्टोरमा आवश्यक सबै औषधि हुन्छ । तर बैशाख सम्म के गर्ने त ?
जिल्ला र क्षेत्रको लागि ३९ करोड १५ लाख भाद्रमा नै पठाइ सकेकोमा पौष मसान्तमा थप ११ करोड ९५ लाख रकम पठाईएको छ । १८ लाख देखि ८० लाख सम्म पैसा जिल्लाहरू माग सइसकेको छ । ( कुन जिल्लाले कति पैसा पाएका छन भन्ने जानकारीका लागि तलको सुचिमा पढ्नु होला) ।
औषधिको १ अर्व ५० करोड रकम मध्ये ५१ करोड १० लाख पैसा जिल्लामा गइसकेको छ । सबै जिल्लाको प्रमुखलाई पोखरामा जम्मा गरेर प्रष्ट निर्देशन दिएको छु, जिल्लामा तपाईले पाएको रकमबाट जति चाहिन्छ औषधि किन्नुहोस, सवै स्वास्थ्य संस्थामा अविलम्ब औषधि पुरयाउहोस । किन्न पनि सजिलो छ १५ दिनको सुचना निकालेर किन्न सकिन्छ, एकदमै इमर्जेन्सी भयो भने सिधै ५ लाखको औषधि खरिद गर्न सक्छन । जसरी हुन्छ औषधि अभाव हुनन दिनुहोस ।
प्रश्न उठ्छ अहिले जति पैसा जिल्लालाई पठाएको छ पुग्छ ? प्रष्ट छ जिल्लाले औषधि आफैले खरिद गरेर पुयाउनुपर्ने बैशाख सम्म मात्र हो । प्रत्येक जिल्लालाई भनिएको छ यति गर्दा पनि औषधिको अभाव हुन्छ र पैसा पुग्दैन भने २४ घण्टा समय राखेर सिधै मन्त्रालयलाई खवर गर्नुहोस २४ घन्टामा कि औषधि पाउनुहुन्छ कि किन्ने पैसा ।
यो संगै औषधिको अवस्था सम्बन्धि समन्वय गर्न प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरिएको छ भने प्रत्येक क्षेत्रमा फोकल व्यक्ति तोकिएको छ । क्षेत्रमा क्तयअप को लागि थप पैसा पठाइएको छ । क्षेत्रमा समन्वय गर्न जिम्मेवारी तोकिएको छ । अनुगमनका लागि खटाइएको छ ।
माथि,उल्लेख गरिएको व्यवस्था पछि देशका सवै स्वास्थ्य चौकीमा औषधि पुरै उपलव्ध छ भन्ने मेरो दावि हो त ! कदापी होइन ! औषधिको उपलव्धताको जिल्लाहरूमा २ खालको अवस्था देखिएको छ ।
१. जिल्लाको नेतृत्वले उत्साहको साथ अग्रसर तालिएको छ, दशै अगाडि नै औषधि किन्न प्रकृया शुरु गरेका छन, औषधि जिल्लामा आएको छ, स्वास्थ्यचौकीसम्म पुरयाउदै पनि छ । इमान्दारिताको साथ कोशिस गरिरहेका छन ।
तर पनि कतिपय स्वास्थ्य चौकीको इन्चार्जहरूले कि जिल्लावाट औषधि लादैनन कि लगेको भन्दैनन वा लगेर पनि बाड्दैनन अनि हल्लागरि दिन्छन ‘चौकीमा सिटामोल पनि छैन, केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लाले यति महिना भयो औषधि पठाएको छैन’। यसले गर्दा जिल्लाको नेतृत्वले काम गर्दा गर्दै पनि समग्र जिल्ला औषधि उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन ।
२. जिल्लाको नेतृत्वमा उत्साह नै छैन, अग्रसरता नै लिदैनन अनिकति सजिलो छ आफ्नो जिल्लाको स्वास्थ्य संस्थामा औषधि नभएको समाचार छापिंदा नलजाइकन भन्छ ‘केन्द्रले औषधि पठाएको छैन’ तर मेरो जिल्लामा कति पैसा पठाएको छ, भाद्रमा प्राप्त भएको पैसावाट कति औषधि किनियो, कति कुनकुन स्वास्थ्य चौकीमा पुयाइयो, अनि यतिले पनि पुगेन भने २४ घण्टाभित्र कि त पैसा पठाउने कि त औषधि पठाउने मन्त्रालयको प्रतिवद्धतामा टेकेर उसले कतिमाग गरेको छ, यो सवै केहि पनि भन्दैन ।
खालि यही भन्छ औषधि पठाएकै छैन त्यसैले औषधि छैन । अनि अग्रसरता नलिने यस्तो प्रमुखले जिल्लामा औषधि नै छैन, सिटामोल पनि छैन भन्ने तथ्यमा नै टेकेर समाचार त लेखियो तर तेहि जिल्लाको प्रमुखलाई बैशाखसम्म जिल्लामा औषधि पुरयाउन कति पैसा उपलब्ध गराईएको छ भन्ने तथ्य नलेखेको समाचारले सजिलो बनाएको छ ।
म प्रष्ट छु, जिल्लाको नेतृत्वले काम गरेन भने पनि जिम्मेवारी मेरो नै हो, म गराएर नै छोड्छु । यदी कसैले गर्दैनन भने काम नगर्नेले छोड्छन, गर्नेले पुरस्कार पाउछन नगर्नेले दण्ड पाउछन नै तर यसको लागि तथ्यको सम्पूर्ण पक्ष संप्रेसित भयो भने मलाई कामगर्ने वातावरण बन्छ । यसका निम्ति सवैसंग सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।
स्वास्थ्यमन्त्री, नेपाल सरकार